अस्पतालको लापर्बाही, ब्लड क्यान्सरको औषधिमा धमिरा
निशान न्युज बैसाख २१, 2075
असुरक्षित रुपमा औषधि राख्दा महत्वपूर्ण ग्लिभेक नामको औषधिमा धमिरा लागेको हो । उक्त औषधि क्रोमिक माइलोइड ल्यूकेमिया सिएमएलका बिरामीलाई खुवाइन्छ । म्याक्स फाउण्डेसन, अमेरिकाले ब्लड क्यान्सर रोग लागेका बिरामीलाई भनेर सहयोग गर्दै आएको करीब ३०/४० प्याकेट औषधिमा धमिरा लागेको पाइएको हो ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्यले धमिरा लागेको स्वीकार गर्दै औषधि नै बिग्रने गरी भने धमिराले नखाएको दाबी गरे । ‘काठ भएको ठाउँमा धमिरा छ, मेन कभरलाई धमिराले खान शुरु गरेको छ, औषधिमा धमिरा छैन, हामीले निकालिसकेका छौँ ।’ डा आचार्यले भने ।
धमिरा लागेको कतिपय औषधि काम नलाग्ने अवस्थाको जस्तो देखिन्छ । ग्लिभेक १ सय एमजीको उक्त यहाँ स्टकमा ६२ प्याकेट रहेको औषधि शाखा हेर्दै आउनुभएकी स्टाफ नर्स लक्ष्मी न्यौपानेले जानकारी दिए । एउटा प्याकेटमा १ सय वटा ट्याबलेट हुन्छ । केही प्याकेटमा धमिरा लागे पनि औषधिमा नलागेको दाबी उनको छ ।
महँगो औषधि भएकाले विदेशीले सहयोगमा दिँदै आएका छन् । बिरामी प्रमाणित भएको कागजात पठाएपछि सोही कागजातको आधारमा विदेशबाट उक्त औषधि क्यान्सर अस्पताललाई आउँछ । ‘कार्टुनमा अलिकति धमिरा लागेको पाइयो, ट्याब्लेट नै चाँहि खाएको छैन,’ न्यौपानेले भने, ‘१०/१५ प्याकेटमा बाहिरपट्टि धमिरा लागेको छ, तत्कालै नबाँडौँ भनेर मात्रै छुट्याएका छौँ ।’
न्यौपानेले यो औषधि सम्बन्धी बिरामी अस्पतालमा करीब ९ सय जना भएको बताए । कतिपयले अहिले पनि औषधि खाँदै आएका छन् । यति महत्वपूर्ण औषधिलाई लापर्बाहीपूर्वक राख्दा धमिरा लागेको हो । अस्पताल प्रशासनका अनुसार बाहिरबाट आएको कार्टुनमा नै राखिएको तर होसियारी नअपनाउँदा बिरामी बचाउने औषधिमा धमिरा पसेको हो ।
क्यान्सर अस्पतालका सूचना अधिकारी गृहनारायण महतोले क्यान्सर अस्पतालमा धमिरा अलि बढी नै भएको जानकारी दिँदै बाक्लो कार्टुन भएकाले त्यसको तल्लो भागमा धमिरा लागेपनि औषधिमा असर नपरेको दाबी गरे । सो विषयमा म्याक्स फाउण्डेसनले पनि प्रश्न उठाएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ ।
डा. केसीको समर्थनमा आज दबाबमूलक कार्यक्रम हुँदै ‘हामी हजारौँ डा. केसी मिलेर लुटतन्त्रलाई निर्णायक चुनौती दिऔँ'
काठमाडौं । सोलिडारिटी फर डा.गोविन्द केसी अलायन्सले शनिबार माइतिघरमा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने भएको...
यो जाडो मौसममा यसरी राख्नुस बच्चाको ख्याल
काठमाडौं । जाडो मौसममा श्वास्थ्यको बढि ख्याल राख्नपर्छ । बिशेषगरेर यो समयमा बालबालिका र बृद्धबृद्...
डा. केसीको पछिल्लो अपडेट: यस्तो छ अहिलेको स्वास्थ्य अवस्था
काठमाडौं । दश दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य झनझन् खराव हुँदै गएपछि एन्टिवायाटिक चल...
डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याइयाे, शिक्षण अस्पतालको आइसियूमा उपचार हुँदै
काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षाको विषयलाई लिएर १६औँ पटक अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीलाई इलामबाट काठमाड...
के तपाई तोरीको तेलका प्रयोग गर्नु हुन्छ ? यस्ता छन् फाईदा
काठमाडौं । तोरीको तेल खासगरी भारत, रोम र ग्रिसमा हजारौं वर्षदेखि लोकप्रिय रहँदै आएको छ । सबैभन्दा...
के तपाई मह खानुहुन्छ ? यस्ता छन् फाईदाहरु
काठमाडाैं । मह स्वास्थ्यका लागि एकदमै उपयोगी खाद्यपदार्थ हो । यसमा शक्तिवद्र्धक र रोग निरोधक दुवै...